As of Thu, 09 Apr, 2020 00:25
घरघरमा साबुन र माक्स,गाउँगाउँमा सचेतना
जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले ‘घरघरमा साबुन र माक्स,गाउँगाउँमा सचेतना’ अभियान संचालन गरेको छ । विश्वव्यापी माहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमण यसमा स्थानीयलाई सजग गराउन अभियानै संचालन गरिएको हिमाका अध्यक्ष रज बहादुर शाहिले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाकाभरी रहेका करिब १३ सय बढी घरधुरी सदस्यलाई मास्क र साबुन वितरण गरिएको छ । गाउँपालिका १ देखि ७ नम्बर वडा सम्मका सम्पुर्ण नागरिकलाईको पहुँच हुने गरी साबुन र माक्स वितरण गरिएको छ ।
दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेलाई खानाको व्यवस्था
पश्चिम लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाले पालिकाभित्र ज्याला मजदुरी गर्दै आएका श्रमीकहरुलाई ‘लकडाउन’ भएको अवस्थामा अलपत्र पर्नुपर्ने अवस्था आएमा खाना र बासको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा दैनिक ज्यालादारीमा श्रम गर्दै आएका श्रमिकहरुलाई लक्षित गरी यो निर्णय गरेको हो ।
लकडाउनको अवज्ञा गरेपछि पुलमा छेकबार
कोराना भाइरसको संक्रमणबाट मानवजाति नै संकटमा पर्नसक्ने खतरालाई रोक्न नेपाल सरकारले मुलुकभर लकडाउन गरेको छ । तर त्यही मानव लकडाउनलाई पर्वका रूपमा मनाउन भीडभाड गरेर आवतजावत गर्ने वा घुमफिर गर्ने गरेपछि गजुरी गाउँपालिका–५ र सिद्धलेक गाउँपालिका–७ पिपलटार जोड्ने त्रिशुली नदी माथिको झोलुंगे पुलमा छेकवार गरिएको वडाध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडाले बताए ।
३ जना क्वारेन्टाइनमा, सडकमा बार
चैत ४ गतेको जहाजमा फ्रान्सबाट आएकी संक्रमित १९ वर्षीया महिलासँगै आएका १ पुरुषसहित उनका परिवारका ३ जनालाई चैत १२ गतेदेखि क्वारेन्टाइनमा राखिसक्दा समेत स्वास्थ्यकर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) छैन । जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघको हलमा निर्मित क्वारेन्टाइनमा राखिएलगत्तै पीपीई अभावको विषय छलफलको विषय बन्यो । जिल्ला अस्प्तालका प्रमुख डा. सोनिङ लामाले भने, “पीपीई कहिलेसम्म आउँछ थाहा छैन । तथापि हामी आफै पीपीई बनाउन जुटेका छौं ।” डा. लामाका अनुसार अस्पतालकै खर्चमा तत्कालका लागि काम टर्ने गरी पीपीई बनाउन थालिएको छ ।
लकडाउनले छोएन इँटाभट्टालाई, मजदुर जोखिममा
विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा भेटिएपछि सरकारले चैत १८ गतेसम्मका लागि देशभर लकडाउन गरेको छ । लकडाउनले यतिखेर देश ठप्प छ । गतिविधि शून्य छन् । तर भक्तपुरका इँटाभट्टा भने अझै चलायमान छन् । यहाँ सरकारको लकडाउनको कुनै असर परेको छैन । नियमित मजदुर काममा खटिरहेका छन् । साँझ नपर्दै मजदुरको भीडभाड एकै ठाउँमा हुन्छ ।
लकडाउनभन्दा अगाडि नै तिर्थ यात्रामा निस्किएका १४ जना नेपाली घर फिर्ता हुन नपाएर अलपत्र भएका छन् । ती नेपालीहरु भारतको आन्ध्र प्रदेशमा अलपत्र परेका हुन् । पाँचथर फालेलुङ १ का ३ जना सहित झापा र मोरङ जिल्लाबाट तिर्थ यात्राको लागि भारतको आन्ध्र प्रदेशमा गएका उनीहरु लकडाउनका कारण अलपत्र परेका हुन् । “खानेकुरा किनेर खाने खान पनि पाइँदैन । यातायात पनि चलेको छैन । धर्मको लागि आएको, बिजोग भयो,” एक नेपालीले भने । अहिले बास बस्ने ठाउँ नपाउदा सडकमा बस्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
भारतवाट आएका नेपालीहरु तीन दिनदेखि अलपत्र
बाँकेको नेपालगञ्जस्थित जमुनाह नाकामा भारतवाट आएका नेपालीहरु तीन दिनदेखि अलपत्र छन ।
जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटेबस्तीमा पनि कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि लकडाउन गरिएको छ । हाल भेरीगंगा नगरपालिका–२ को सत्तरीनजिकै छिन्चु खोलाकिनारमा बस्दै आएकोमा नगरपालिकाले राउटेबस्ती ‘लकडाउन’ गरेको हो । नगरपालिकाले राउटे समुदायका मानिसलाई हात धुन सिकाउनका लागि स्वास्थ्यकर्मी पनि खटाएको छ ।
लकडाउनको दोस्रो दिन काठमाडौंको बालाजु चोकमा देखिएको दृश्य । कोरोना संक्रमित तेस्रो बिरामी पत्ता लागेसँगै उपत्यकावासी थप त्रसित बनेका छन् ।
दोस्रो दिनको लकडाउन पनि सामान्य
‘लकडाउन’को दोस्रो दिन बुधबार पनि देशभरिको अवस्था सामान्य रह्यो ।
नेपालगञ्ज र सुर्खेत विमानस्थल वरपरका होटलमा करिब १ सय ९० जना हुम्ली बिचल्लीमा परेका छन् । देशका विभिन्न स्थानबाट नेपालगञ्ज र सुर्खेतसम्म आएका हुम्ली लक डाउनले विमानले उडान भर्न नसकेपछि बिचल्लीमा परेका हुन् । घर जान नपाएपछि नेपालगञ्ज विमानस्थल नजिकका होटलमा करिब १ सय २० जना र सुर्खेत विमानस्थल वरपरका होटलमा करिब ७० जना हुम्ली समस्यामा फसेका हुन् । होटलमा बस्नुपर्दा उनीहरु बेखर्ची समेत भएका छन् । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण हुनबाट बच्नको लागि गएको ११ गतेबाट देशभर लक डाउन गर्दा होटलमा बस्दै आएका उनीहरु बेखर्ची परेपछि झनै समस्यामा परेका हुन् ।
देश ‘लकडाउन’ ले पर्सामा दुईवटा विवाह रोकियो
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि नेपाल र भारतमा गरिएको ‘लकडाउन’ ले पर्सामा एक संचारकर्मी सहित दुईजनाको विवाह रोकिएको छ । मंगलबारदेखि नेपालमा र बुधबारदेखि भारतमा गरिएको ‘लकडाउन’ ले बीरगन्जका संचारकर्मी जाकिर हुसेन र बहुदरामाई नगरपालिका वडा नम्बर ५ भौराटारकी एक युवतीको विवाह स्थगित भएको हो । बहुदरामाई नगरपालिका वडा नम्बर ५ का शंकर प्रसाद कुश्वाहाको छोरीको विवाह रोकिएको हो ।
कोरोना भाइरसको प्रभावले तनहुँबाट प्रकाशन हुने दैनिक पत्रपत्रिका आजदेखि बन्द गरिएका छन् । दमौलीबाट प्रकाशन भइरहेका सात र दुलेगौँडाबाट प्रकाशन भइरहेको एक गरी आठ दैनिक पत्रपत्रिका आजदेखि बन्द गरिएको हो ।
सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम रोक्न मंगलबारदेखि देशैभरि लकडाउन गरेको छ । लकडाउनको समयमा सर्वसाधारणलाई बाहिर निस्कन प्रतिबन्धसमेत लगाएको छ । यसैक्रममा नेपालगन्जमा बिहानैदेखि सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन चलेका छैनन् । सरकारले घरभित्रै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेपछि फाट्टफुट्ट बाहेक सडकमा मानिसहरू खासै देखिएका छैनन् । बिहान निस्किएका कतिपय मानिसलाई प्रहरीले सोधपुछ पछि सम्झाएर घर फर्काएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।